ငွေပေးချေခြင်း၊ ပြန်အမ်းခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက် App IO အသုံးပြုနည်း🥇 Emulator.online ▷🥇
The Sims အကြောင်းဘလော့ 4
PC နှင့် Mobile
Windows ကို 10
ငွေပေးချေခြင်း၊ ပြန်အမ်းခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက် App IO အသုံးပြုနည်း
ကျနော်တို့အီတလီပြည်နယ်ကဖြန့်ချိနည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှအာရုံစိုက်လျှင် IO app သစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရပြီ, PagoPA မှဖန်တီးပြီးမည်သည့်စမတ်ဖုန်းတွင်မဆိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ အီတလီနိုင်ငံသားအားလုံးအသုံးပြုနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများစွာသည် IO အက်ပလီကေးရှင်းကိုချက်ချင်းရရှိနိုင်ပုံကိုမသိရသေးဘဲသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည့်ကိရိယာပေါ်မှဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်စဉ် IO အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုရန်အခက်အခဲရှိကြသည်။ SPID နှင့်ဒီဂျစ်တယ်အထောက်အထားကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမကြားဖူးပါက (IO အက်ပလီကေးရှင်းကိုသုံးရန်ဝမ်းနည်းစရာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်)
ဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာမင်းကိုပြမယ် ငွေပေးချေခြင်း၊ ပြန်အမ်းခြင်းနှင့်အစိုးရဆက်သွယ်ရေးအတွက် IO အက်ပ်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း, စတိုးဆိုင်များတွင်လျင်မြန်စွာငွေပေးချေခြင်းနှင့်လည်းအချို့သောပမာဏဖြုန်းသောသူတို့အဘို့သိုထားအသုံးစရိတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆုလာဘ်နှင့်ပတ်သက်သောအစပျိုးခြင်းမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခြင်းငှါ။
IO application သည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသော်လည်း၎င်းကို၎င်း၏အပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ခြင်း ပထမဆုံး SPID ရမယ်ထို့နောက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးလျှောက်လွှာကိုရယူပါ။ အောက်ဖော်ပြပါအခန်းများတွင်ခရက်ဒစ်ကဒ် (သို့) ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်ပြားထည့်သွင်းပုံနှင့်အများပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်မှုအကြောင်းသတိပေးချက်များကိုမည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တင်ပြပါမည်။
SPID ကိုသက်ဝင်စေပြီး IO အက်ပ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
IO အပလီကေးရှင်းကိုအသုံးမပြုမီကျွန်ုပ်တို့သည် SPID ကိုသေချာပေါက်ဖန်တီးရမည်, အီတလီနိုင်ငံကတိုက်ရိုက်အသိအမှတ်ပြုဒီဂျစ်တယ်ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထူးကဒ်ပြားကိုအခမဲ့ပေးတဲ့ပံ့ပိုးသူများထံမှရရှိနိုင်ပါသည် (ထို့ကြောင့်၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဘာမှပေးစရာမလိုပါ) ။ လက်ရှိအချိန်မှာ SPID ကိုလျင်မြန်စွာသက်ဝင်စေရန်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးသူများ ငါက
PosteID SPID ကိုဖွင့်ထားသည်
Namirial ID နှင့် SPID
Aruba SPID အိုင်ဒီ
မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုသင်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေလိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သော authentication method ကိုရွေးချယ်ပါ။ (ဥပမာ၊ Poste Italiane အတွက်စာတိုက်သို့သွားခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်) ထို့ကြောင့် SPID အထောက်အထားများကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် IO လျှောက်လွှာ၌တည်၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် SPID ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်များကိုဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည် SPID ကိုဘယ်လိုတောင်းလျှောက်ရမလဲ mi SPID ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ.
SPID ရရှိပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် Android နှင့် iPhone အတွက်အခမဲ့ IO app ကိုရယူပါ ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးမှတိုက်ရိုက်။
အကြွေးဝယ်ကတ်၊ prepaid သို့မဟုတ် debit ကဒ်ထည့်ပါ
လျှောက်လွှာကိုကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းစက်ထဲသို့ထည့်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုဖွင့်ပါ၊ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ SPID ဖြင့်ဝင်ရောက်ပါ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝိသေသလက္ခဏာကိုဖန်တီးတဲ့ SPID ပံ့ပိုးသူကိုရွေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ၊ SPID မှရရှိသောအချက်အလက်များကိုအတည်ပြုပါ၊ ထို့နောက်လျှောက်လွှာ၏အသုံးပြုမှုအခြေအနေများကိုလက်ခံပါမည်။ နောက်မျက်နှာပြင်တွင် ၆- ဂဏန်းရှိသောပိတ်ဆို့ခြင်း PIN ကိုရွေးချယ်သည်၊ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုမှုကိုဖွင့်ရန်လုပ်သည်ကိုရွေးချယ်ပြီးအီးမေးလ်လိပ်စာကိုအတည်ပြုသည် (SPID မှရရှိပြီးဖြစ်သည်) ။
လျှောက်လွှာ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမျက်နှာပြင်ကို ၀ င်ရောက်သည်နှင့် menu ၏အောက်ခြေတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်၊ ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ် (Postepay ကဲ့သို့) သို့မဟုတ် ATM ကဒ်တစ်ခုထည့်နိုင်သည်။ ပိုက်ဆံအိတ်ဒြပ်စင်၏ညာဘက်အပေါ်ကိုနှိပ်ပါ ထည့်ပါဆောင်းပါးရွေးချယ်ခြင်း ငွေပေးချေစနစ် နှင့်အကြားရွေးချယ်ရာတွင် ခရက်ဒစ်၊, BancoPosta သို့မဟုတ် Postepay ကဒ် mi ငွေပေးချေမှု CardBAMCOMAT။ ကဒ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်သည်။ ကဒ်နံပါတ်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့နှင့်ကဒ်၏လုံခြုံရေးကုဒ်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်သည် (များသောအားဖြင့်နောက်ကျောရှိ CVV2) ။ အဆုံးမှာကျနော်တို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဆက်လက်ပြီးရှိသည် IO အပလီကေးရှင်းသို့ကဒ်ထည့်သွင်းခြင်းကိုအတည်ပြုရန်။
တရားဝင်ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်ကို IO application ထဲသို့ထည့်ပြီးသောအခါ menu ကိုဝင်ပါ န်ဆောင်မှုများ ဤအသုံးချပရိုဂရမ်၏အခြားအသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်များကိုရှာဖွေရန် - ကားခွန်ပေးဆောင်ရဘယ်မှာသုံးဖြုန်းဖို့ရွေးပါ အားလပ်ရက်ဘောက်ချာအကြောင်းသတိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိ IMU နှင့် TASI အခွန်များ၏နေ့စွဲ, သက်တမ်းကုန်ဆုံးနှင့်ပတ်သက်။ အသိပေးစာကိုလက်ခံရရှိ COUNTRIES မှ (စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအပေါ်အခွန်), ကျောင်းအခကြေးငွေပေးဆောင်နှင့် ပြန်အမ်းငွေကိုသက်ဝင်.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏မြှို့နယ်သည်ဖော်ပြခဲ့သောသူများ၌ပါ ၀ င်ပါက (မြှို့နယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင် ထပ်မံ၍ PagoPA ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းရှိမရှိကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်) ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အွန်လိုင်းမှအခွန်အခအားလုံးနီးပါးကိုငွေပေးချေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ပြည်နယ်ငွေပေးချေမှုကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည် နိုင်ငံတော်ငွေပြန်အမ်းခြင်းကိုမည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။ ကတ်၊ အခြေအနေနှင့်ကန့်သတ်ချက်များ.
ကဒ်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမှဆက်သွယ်မှုများကိုလက်ခံရန် IO အပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုလိုပါသလား။ ဆက်သွယ်မှုအသစ်တစ်ခုနှင့်အတူဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သတိပေးချက်တစ်ခုပို့လိမ့်မည်။ (သတိပေးချက်များပေါ်မလာပါကပါဝါချွေတာခြင်း၊ အထူးသဖြင့် Android တွင်စစ်ဆေးခြင်း) app ကိုဖုန်းတွင်တပ်ဆင်ထားရန်လုံလောက်သည်။ အသိပေးချက်တစ်ခုကိုလက်လွတ်မသွားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် IO အက်ပ်မှမက်ဆေ့ခ်ျများကိုကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလိပ်စာသို့လည်းပို့နိုင်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်၊ သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် IO အက်ပ်ကိုဖွင့်ရုံ၊ ပင်နံပါတ်သို့မဟုတ် biometric access ဖြင့်လော့ဂ်လုပ်ပါ၊ မီနူး ပရိုဖိုင်းကိုမီနူးကိုရွေးချယ်ပါ အီးမေးလ်ဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျများလွှဲပြောင်းခြင်း နောက်ဆုံးဒြပ်စင်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးအတွက်ဖွင့်ပါ။ အီးမေးလ်အကွက်မှမက်ဆေ့ခ်ျများလက်ခံရရှိမည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လိုပါက ၀ န်ဆောင်မှုအားဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရွေးပြီးသောအရာများကိုရွေးချယ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့လက်ခံလိုသောမက်ဆေ့ခ်ျအမျိုးအစားကိုဖော်ပြသည်။
IO အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ပြသနာများဆက်လက်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်များကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် အသိပေးချက်များနှောင့်နှေးပါက Android ဘက်ထရီကိုပိတ်ပါ mi သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ Android သတိပေးချက်များကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ.
IO application သည် Italian State မှဖန်တီးခဲ့သော IT အဆင့်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ အမှန်မှာ၊ လျှောက်လွှာသည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီး၎င်းသည် SPID ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးနှင့်ကောင်းစွာပေါင်းစပ်သည်။ သင့်အားပြည်နယ်မှပေးသောငွေပြန်အမ်းငွေကိုလက်ခံရန်၊ နှင့်အခွန်အခများနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုပုံစံများသည် PEC လိပ်စာကိုသေချာပေါက်ဆက်သွယ်စရာမလိုဘဲ (သို့သော်လက်ခံရရှိသည့်သတင်းစကားများကိုတုံ့ပြန်ရန်အကြံပြုသည်) ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအီးမေးလ်များကိုတုန့်ပြန်ရန်အသိအမှတ်ပြုအီးမေးလ်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ PEC အီးမေးလ်လိပ်စာဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။.
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် IO application နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်ကောင်းသောကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်ပြားကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်များကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးအခမဲ့ virtual credit ကဒ် mi အန္တရာယ်မရှိဘဲအွန်လိုင်းတွင် ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးကြိုတင်ပေးကဒ်များ.
ဗွီဒီယိုကို MP4 သို့ DVD နှင့် DVD သို့ MP4 သို့ပြောင်းပါ
ဂူဂဲလ်မှ AR သက်ရောက်မှုများ (နေရာများ၊ ဂြိုဟ်များနှင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်) ဖြင့် 3D ရှိမော်ဒယ်များ
အသံဖြင့်ထိန်းချုပ်မီးသတ်တီဗွီ (ပဲ့တင်သံမရှိ၊ အဝေးမှမရှိ Alexa)
Amazon Echo တွင် Alexa အတွက်အဖြေများဖြင့်မေးခွန်းသစ်များဖန်တီးပါ
ကြိုးကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက်အကောင်းဆုံး app ကို
Application တစ်ခုကို Google Play Store နှင့် Apple Store သို့တင်ပါ
IGTV လမ်းညွှန်နှင့် Instagram နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု
iPhone ကင်မရာကိုအသုံးပြုနည်း - အသုံးဝင်သောအချက်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များ
iPhone 12 ပုံစံများနှင့်အမျိုးအစားများ
နေကြပါပြီ tac တိုး
ဂူဂဲလ် Assistant နှင့် Nest ဖြင့်အခမဲ့သီချင်းများကိုမည်သို့နားထောင်ရမည်နည်း
သင်ဤ site ကိုဆက်လက်အသုံးပြုလျှင်သင် cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းလက်ခံပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက